मिर्गौला बिरामी अस्पताल आउँदा दुवै हातमा सिरिन्ज खोप्नु हुँदैन
डा. प्रेमराज वैद्य, मुटु तथा रक्तनली रोग विशेषज्ञ, निदान अस्पताल
संसारमा मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ । सजिलै मिर्गौला नपाइने हुँदा डायलासिसमा बसेर उपचार गराउनेको संख्या ठूलो छ । डायलासिसका मुख्यतया हेमो डायलासिस र सीएपीडी पेरिटोनियल गरी दुई तरीका छन् । यसमा हेमो डायलासिसअन्तर्गत फिस्टुला बनाएर गरिने डायलासिस सबैभन्दा उपयुक्त हुने मुटु तथा रक्तनली रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्य बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा फिस्टुला के हो र कसरी बनाउने तथा यसले गर्ने काम आदि विषयमा अभियान दैनिकका काशीराम बजगाईले डा. वैद्यसँग गरेको कुराकानीको सारः
एभी फिस्टुला भनेको के हो ?
कुनै कारणले मिर्गौला फेल भयो भने मिर्गौला प्रत्यारोपण वा डायलासिस गर्न सकिन्छ । हेमो डायलासिस र सीएपीडी पेरिटोनियल डायलासिस गरी दुई तरिकाका डायलासिस हाल प्रचलनमा छन् । चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै गरिने डायलासिस पेरिटोनियल डायलासिस हो । यसमा पेटमा आन्द्राको बाहिरको पत्र र छालाको बीचमा पाइप राखिन्छ । दुईओटा पाइप राखेर एउटा पाइपमार्फत २/३ लिटर पानी पेटमा पठाएर ३/४ घण्टापछि अर्को पाइपबाट शरीरमा भएको विकार बाहिर निकाल्न सकिन्छ । हेमो डायलासिसमा मेशिनमार्फत विशेषज्ञको सहयोगमा रगत सफा गरिन्छ । हेमो डायलासिसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प एभी फिस्टुलाको निर्माण हो ।
हेमो डायलासिस कसरी गरिन्छ ।
हेमो डायलासिस गर्दा आकस्मिक अवस्थामा घाँटीमा पाइप राखेर पाइपबाट रगत फिल्टर गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा शुरूमा टेम्पोररी क्याथेटर राखिन्छ । तर जसको फिस्टुला बनाउन नसकिने गरी नसा खराब भएको छ र तत्काल फिस्टुला बनाउन सकिने अवस्थामा छैन भने उसको घाँटीबाट छातीसम्म पर्मानेन्ट क्याथेटर राख्न सकिन्छ । बढीमा पर्मानेन्ट क्याथेटर १० महीनासम्म राख्न सकिन्छ । घाँटीको दुइटै नसा बिग्रिएको छ भने तिघ्रामा पनि त्यो क्याथेटर राख्न सकिन्छ । तिघ्राको नशामा राखिएको सिलिकन पाइप राख्दा रगत जम्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यो समयमा रगतको पातलो बनाउने औषधि वा इन्जेक्शनको प्रयोग गरिन्छ । फिस्टुला बनाएपछि पाइप झिक्न सकिन्छ र यदि फिस्टुला बनाउन नसकिने अवस्था छ भने नक्कली नसा पनि राख्न सकिन्छ ।
डायलासिसका लागि उपयुक्त विकल्प कुन हो ?
पेटमा पाइप राखेर र मेशिनको माध्यमबाट डायलासिस गर्न सकिन्छ । पाइप राखेर डायलासिस गर्दा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । हेमो डायलासिस त्यसमा पनि फिस्टुला सबैभन्दा राम्रो विधि हो ।
एभी फिस्टुला कसरी बनाइन्छ ?
हातमा रक्तनली राम्रो छ भने रेडियल धमनी र सेफालिक शिरामा फिस्टुला बनाइन्छ । त्यो राम्रो नभए त्यसभन्दा माथि र त्यो पनि राम्रो नभए त्यो भन्दा माथि गर्दै सेफालिक शिरा र ब्राखियल धमनीसम्म फिस्टुला बनाउन सकिन्छ । यो बनाउँदा बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ । संसारमा यसरी जोडिएको नशा ३० प्रतिशतसम्म बिग्रिने गरेको छ । भिडियो एक्सरे गरेर नशा ब्लक छ कि छैन, नशाको आकार कत्रो छ, फिस्टुला बनाउँदा डायलासिस गर्न सकिने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेर फिस्टुला बनाउने हो भने बिग्रिने सम्भावना कम हुन्छ ।
फिस्टुला किन बनाउने ?
डायलासिस गर्दा रगत मेशिनमा फिल्टर गर्न सजिलो होस् भनेर फिस्टुला बनाइन्छ । डायलासिस गर्दा रगतको चाप कम्तीमा २०० एमएल प्रतिमिनेट हुनुपर्छ । डायलासिस गर्दा रगतको चाप कम भएमा रगत पगाल्ने औषधि राख्दा पनि रगत छिट्टै जम्छ र फिल्टर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा डायलासिसको राम्रो नतिजा आउँदैन । रगतको नलीमा रगतको चाप कम हुने भएकाले डायलासिसका लागि रगतको चाप बढाउन फिस्टुला बनाइन्छ ।
डायलासिसभन्दा पहिले नै फिस्टुला बनाउनुपर्छ ?
फिस्टुला बन्न कम्तीमा २ देखि ३ महीना लाग्ने भएकाले डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था छ भने डायलासिस गर्ने समयभन्दा ५÷६ महीना अगाडि नै फिस्टुला बनाउन आवश्यक हुन्छ । जनचेतनाको अभावले पनि समयमै फिस्टुला बनाउन नआउनेको संख्या ठूलो छ । बिरामीलाई डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा डायलासिस गर्ने समयभन्दा पहिले नै फिस्टुला निर्माण गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुन्छ । तर डाक्टरले जानकारी दिँदा पनि बिरामी समयमै फिस्टुला बनाउन आइपुग्दैनन् । शल्यक्रिया गरेर शिरा र धमनी जोडिने भएकाले डायलासिस गर्ने समयभन्दा अगाडि नै किन शरीरमा घाउ बनाएर फिस्टुला बनाउने भन्ने जनचेतनाको अभावले बिरामी फिस्टुला बनाउन चाहँदैनन् । तर, समयमै फिस्टुला बनाउने हो भने रोगको उपचार सहज हुन्छ ।
फिस्टुला बनाइसकेपछि बिग्रिने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
नसा राम्रो नभए फिस्टुला बन्दैन । बने पनि कसैको बिग्रिने र खुम्चिने हुन्छ । रगत जमेर वा रक्तचाप कम हुनुलगायत कारणले नसा बन्द हुन सक्छ । फिस्टुला बनाउनुअघि नै राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाउने हो भने बिग्रिँदैन ।
के कारणले नसा बिग्रिन सक्छ ?
मिर्गौलाका बिरामी अस्पतालमा आउनेवित्तिकै दुवैै हातमा सुई घोच्नु हुँदैन । एउटा हात बचाएर राख्नुपर्छ । जुन हातको नसा राम्रो छ त्यो बचाउनुपर्छ । त्यसमा फिस्टुला बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । शारिरीक व्यायामको कमी, सिरिन्जको प्रयोग लगायत कारणले नसा बिग्रिने सम्भावना हुने हुँदा यसबाट बच्नुपर्छ ।
कतिपटकसम्म फिस्टुला बनाउन सकिन्छ र यसको आयु कति वर्ष हुन्छ ?
हालसम्म १० पटकसम्म बनाइएको छ । फिस्टुला राम्रो बनेको छ, नशा राम्रो छ भने यसले २०औं वर्षसम्म पनि काम गर्छ ।
फिस्टुला बनाएपछि कुनै समस्या पनि देखिन्छ ?
फिस्टुला बनाउँदा ठूलो प्वाल पारियो भने दैनिक ड्रेसिङ गर्नुपर्ने, रगत बग्ने आदि समस्या देखिन सक्छ । जसकारण फिस्टुला बनाउँदा जतिसक्दो सानो प्वाल बनाउनुपर्छ । ठूलो प्वाल बनाउँदा औंला नचल्ने, हात नचल्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
फिस्टुला बनाएपछि कति समयको अन्तरमा जाँच गर्नुपर्छ ?
फिस्टुला बनाएको एक हप्तापछि त्यसको जाँच गरिन्छ । घाउमा सामान्य समस्या भए मलम लगाइन्छ । त्यसपछि टेनिस बल चलाउन दिइन्छ । १ महीनाजति हातले बल चलाएपछि त्यसको पुनः जाँच गरिन्छ । जाँच गर्दा फिस्टुला विकसित भएको छ भने मात्रै डायलासिस गर्नुपर्छ ।